1 Mpanjaka 1 - Ny Baiboly
1 Mpanjaka toko 1
Ny fahanteran'i Davida, Abisaga - Teti-dratsin'i Adoniasa - Ny nanendren'i Davida an'i Salomona ho mpanjaka.
1Efa zokiolona sy nandroso fahanterana Davida, ka na norakofan-damba aza tsy nahatsiaro hafanana intsony. 2Ary hoy ny mpanompony taminy: Aoka hitadiavana zazavavy virjiny ny mpanjaka tompoko, hitoetra eo anatrehan'ny mpanjaka sy hitaiza azy, ary handry eo amin'ny tratranao, ka dia hafana ny mpanjaka tompoko. 3Dia nitady zazavavy tsara tarehy eran'ny tanin'Israely rehetra ny olona, ka nahita an'i Abisaga Sonamita, ary nentina tao amin'ny mpanjaka io. 4Tsara tarehy tokoa razazavavy, sady nitaiza sy nanompo ny mpanjaka, nefa ny mpanjaka tsy nahalala azy.
5Ary Adoniasa nanandra-tena, ka nanao anakampo hoe: Izaho no ho mpanjaka. Ary nanomana kalesy aman-tsoavaly ho azy izy, ary olona dimampolo lahy ho mpihazakazaka eo alohany. 6Ary ny rainy tsy mbola mba nampalahelo azy na oviana na oviana tamin'ny andro niainany nanao hoe: Nahoana hianao no manao toy izao? Sady tsara tarehy tokoa moa Adoniasa, ary nateraky ny reniny izy nanaraka an'i Absaloma. 7Nisy resadresaka natao tamin'i Joaba, zanak'i Sarvià sy tamin'i Abiatara mpisorona, ka rafitra niandany tamin'i Adoniasa ireo. 8Tsy mba nety nikambana tamin'i Adoniasa kosa Sadaoka mpisorona, Banaiasa zanak'i Joiadasa, Natàna mpaminany, Semeia, Reia, mbamin'ny lehilahy maherin'i Davida. 9Ary Adoniasa namono ondry sy omby ary zanak'omby matavy, teo akaikin'ny vaton'i Zoheleta anilan'i En-Rogela, ka nanasa ny rahalahiny rehetra, zanaky ny mpanjaka, mbamin'ny lehilahy rehetra amin'i Jodà mpanompon'ny mpanjaka. 10Samy tsy nasainy anefa na Natàna mpaminany, na Banaiasa, na ny lehilahy mahery, na Salomona rahalahiny.
11Ka hoy Natàna tamin'i Betsabea renin'i Salomona: Tsy renao va fa efa tonga mpanjaka Adoniasa zanak'i Hagita, nefa tsy mahalala izany akory Davida tompontsika? 12Koa etsy ange avelao homeko hevitra hianao ankehitriny hamonjenao ny ainao sy ny ain'i Salomona zanakao. 13Mandehana midira ao amin'i Davida mpanjaka ka lazao aminy hoe: Ry mpanjaka tompoko ô: tsy efa nianiana tamiko mpanomponao va hianao, nanao hoe: Salomona zanakao no hanjaka handimby ahy, ary izy no hipetraka eo amin'ny seza fiandrianako? Ka ahoana àry no Adoniasa indray ity no tonga mpanjaka? 14Ary indro fa ilay mbola miteny amin'ny mpanjaka iny hianao, dia hiditra avy aorianao koa aho, ka hanamarina ny teninao.
15Dia nankao amin'ny mpanjaka tao an'efitranony, Betsabea; efa antitra dia antitra ny mpanjaka, ary Abisaga Sonimata nanompo azy teo. 16Niondrika Betsabea, dia niankohoka teo anatrehany, ka hoy ny mpanjaka: Inona no ilainao? 17Dia hoy ny navaliny azy: Tompokolahy ô, Iaveh Andriamanitrao no efa nianiananao tamin'ny mpanompovavinao hoe: Salomona zanakao no hanjaka handimby ahy, ary izy no hipetraka eo amin'ny seza fiandrianako. 18Kanjo ankehitriny, indro fa Adoniasa no tonga mpanjaka; kanefa hianao tsy mahalala izany akory, ry mpanjaka tompoko. 19Izy efa namono omby aman-janak'omby matavy mbamin'ny ondry betsaka; efa nasainy avokoa ny zanakalahin'ny mpanjaka sy Abiatara mpisorona, ary Joaba filohan'ny tafika, fa Salomona mpanomponao tsy mba nasainy. 20Ny mason'Israely rehetra anefa izao, ry mpanjaka tompoko ô, dia samy manandrandra anao, hanambara izay hipetraka handimby anao, eo amin'ny seza fiandrianan'ny mpanjaka tompoko. 21Fa raha tsy izany, rahefa mody amin'ny razany ny mpanjaka tompoko, dia hatao olo-meloka izaho sy Salomona zanako.
22Mbola niteny amin'ny mpanjaka ao Betsabea, dia indro tonga koa Natàna mpaminany. 23Ka nambara tamin'ny mpanjaka hoe: Indro Natàna mpaminany. Dia niditra nanoloana ny mpanjaka izy, dia niankohoka tamin'ny tany teo anatrehany, 24ary hoy Natàna hoe: Ry mpanjaka tompoko ô, hianao angaha efa nilaza hoe: Adoniasa no hanjaka handimby ahy, sy hipetraka eo amin'ny seza fiandrianako? 25Fa nidina androany izy izao, ka namono omby aman-janak'omby matavy sy ondry be dia be; nasainy avokoa ny zanakalahin'ny mpanjaka sy ny filohan'ny tafika ary Abiatara mpisorona. Indro mihinana sy misotro eo anatrehany ireo izao, ka manao hoe: Ho ela velona anie Adoniasa mpanjaka! 26Samy tsy nasainy anefa na izaho mpanomponao na Sadaoka mpisorona, na Banaiasa zanak'i Joiadasa, na Salomona mpanomponao. 27Ka moa ve avy amin'ny mpanjaka tompoko no isehoan'izany zavatra izany, fa tsy mba nampahafantarinao ny mpanomponao izay hipetraka handimby ny mpanjaka tompoko eo amin'ny seza fiandrianany?
28Ary namaly Davida mpanjaka nanao hoe: Asaovy mankatý Betsabea. Dia niditra teo anatrehan'ny mpanjaka ravehivavy ary nandroso ho eo anatrehan'ny mpanjaka. 29Ka nanao izao fianianana izao ny mpanjaka: Ho velona anie Iaveh, izay nanafaka ahy tamin'ny loza rehetra, 30dia hotanterahiko anio ilay fianianana nataoko tamin'ny Tompo Andriamanitr'Israely hoe: Salomona zanakao lahy hanjaka handimby ahy ary hipetraka eo amin'ny seza fiandrianako hisolo ahy. 31Koa niondrika nihohoka tamin'ny tany teo anoloan'ny mpanjaka Betsabea, dia nanao hoe: Ho velona mandrakizay anie ny tompoko Davida mpanjaka!
32Ary hoy Davida mpanjaka: Asaovy mankatý Sadaoka mpisorona sy Natàna mpaminany, ary Banaiasa zanak'i Joiadasa. Nony niditra nankeo anatrehan'ny mpanjaka ireo, 33dia hoy ny mpanjaka tamin'izy ireo: Ento miaraka aminareo ny mpanompon'ny tomponareo, ka ampitaingeno ny molevaviko Salomona zanako, dia ento midina mankany Gihona. 34Rahefa mby any, Sadaoka mpisorona sy Natàna mpaminany dia hanosotra azy ho mpanjaka amin'Israely, ary hianareo hitsoka anjomara sy hilaza hoe: Ho ela velona anie Salomona mpanjaka! 35Rahefa izany, miakara manaraka azy hianareo, fa ho avy hipetraka eo amin'ny seza fiandrianako izy, ka hanjaka hisolo ahy, satria izy no tendreko ho filohan'Israely sy Jodà. 36Dia namaly Banaiasa zanak'i Joiadasa ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe: Amena! Ho toy izany koa anie no didin'ny Tompo Andriamanitry ny mpanjaka tompoko! 37Ho toy ny nomban'ny Tompo ny mpanjaka tompoko anie no hombàny an'i Salomona koa ary hasandrany ho ambony noho ny seza fiandrianan'i Davida mpanjaka tompoko anie ny seza fiandrianan'i Salomona!
38Dia nandeha Sadaoka mpisorona sy Natàna mpaminany, ary Banaiasa zanak'i Joiadasa mbamin'ny Keretiana sy ny Feletiana; nasainy nitaingina ny molevavin'i Davida mpanjaka Salomona, dia nentiny nankany Gihona. 39Ary Sadaoka mpisorona, naka ny tandroka misy diloilo tao amin'ny tabernaka, dia nanosotra an'i Salomona, ary nitsoka anjomara ny olona, ary ny vahoaka rehetra nanao hoe: Ho ela velona anie Salomona mpanjaka! 40Rahefa izany, dia niakatra nanaraka azy ny vahoaka rehetra. Nitsoka sodina ny vahoaka sy nifaly indrindra, ka nahavaky ny tany ny horakoraka avy amin'izy ireo.
41Ren'i Adoniasa sy ireo nasainy rehetra, izay teo aminy, izany, tamin'ilay nanapitra ny fihinanam-beny iny izy. Ary hoy Joaba nandre ny feon'anjomara: Tabataba inona izato avy amin'ny tanàna mihotakotaka? 42Mbola miteny eo izy, no indro tonga Jonatasy zanak'i Abiatara mpisorona. Hoy Adoniasa taminy: Mandrosoa fa lehilahy mahery fo hianao, ka mpitondra zava-baovao tsara. 43Dia namaly Jonatasy, ka nanao tamin'i Adoniasa hoe: Eny lahy, izany tokoa, fa nanangana an'i Salomona ho mpanjaka Davida mpanjaka tompontsika. 44Nirahin'ny mpanjaka hiaraka aminy Sadaoka mpisorona sy Natàna mpaminany ary Banaiasa zanak'i Joiadasa, mbamin'ny Keretiana sy ny Feletiana, ka nampitaingenin'ireo ny molevavin'ny mpanjaka izy. 45Nohosoran'i Sadaoka mpisorona sy Natàna mpaminany ho mpanjaka izy, tany Gihona; dia niakatra avy eny tamim-piravoravoana izy ireo, ka mihotakotaka ny tanàna, ary ny tabataban'izany ilay renareo teo. 46Ary efa nipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny fanjakana aza Salomona; 47ary ny mpanompon'ny mpanjaka aza, efa avy nisaotra an'i Davida mpanjaka tompontsika, nanao hoe: Hataon'ny Andriamanitrao malaza noho ny anaranao anie ny anaran'i Salomona, ary hasandrany ho ambony noho ny seza fiandriananao ny seza fiandrianany! Dia niankohoka teo am-parafara ny mpanjaka. 48Ary niteny toy izao aza ny mpanjaka nanao hoe: Isaorana anie Iaveh Andriamanitr'Israely, fa nanome ahy mpandimby eo amin'ny seza fiandrianako izy androany, hahazoako mahita maso an'izany.
49Raiki-tahotra mafy izy rehetra nasain'i Adoniasa ka tafatsangana dia samy lasa nandeha amin'izay nalehany avy. 50Adoniasa natahotra an'i Salomona ka nitsangana, dia nandeha namikitra tamin'ny tandroky ny otely. 51Ary nisy nilaza izany tamin'i Salomona nanao hoe: Indro Adoniasa matahotra an'i Salomona mpanjaka, ary indro izy namikitra amin'ny tandroky ny otely, nanao hoe: Aoka hianiana amiko Salomona mpanjaka anio, fa tsy hamono ny mpanompony amin'ny sabatra. 52Dia hoy Salomona: Raha miseho ho lehilahy mahery izy, dia tsy hisy latsaka amin'ny tany na dia singam-bolony iray aza, fa raha misy heloka hita aminy kosa, dia ho faty izy. 53Ary naniraka olona hampidina azy hiala teo amin'ny otely Salomona; ka tonga niankohoka teo anatrehan'i Salomona mpanjaka izy, dia hoy Salomona taminy hoe: Mandehana any an-tranonao. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.5837 seconds